အပြေးလေ့ကျင့်ခန်းထက် အဆီပိုလောင်ကျွမ်းစေမည့် လေ့ကျင့်ခန်း ၈ ခု - ONE DAILY MEDIA
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန် စီစဉ်နေသူတိုင်းအတွက် ပြေးခြင်းဟာ ပထမဆုံး သတိရလာမည့် လေ့ကျင့်ခန်းများဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ 155 ပေါင်လူတစ်ဦးအတွက်5မိုင်နှုန်းဖြင့် မိနစ် 30 ပြေးခြင်းသည် 298 ကယ်လိုရီကဲ့သို့ လောင်ကျွမ်းစေသည် ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ကျိန်းသေပေါက်ပြောနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အချို့သောလူများကတော့ မပြေးလွှားချင်ကြပါဘူး။ ၎င်းတို့၏ ဒူးနှင့် အဆစ်များပေါ်တွင် အားပြု ပြေးလွှားရန် ပျင်းစရာကောင်းသည်ဟု ထင်နိုင်ကြပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့က အပြေးထက် အဆီပိုလောင်ကျွမ်းနိုင်သည့် အခြားလေ့ကျင့်ခန်းအချို့ကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် ဤဆောင်းပါးအဆုံးက ဘောနပ်စ် ‘လေ့ကျင့်ခန်း’ ကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
(၁) ကြိုးခုန်ခြင်း (၃၇၂ ကယ်လိုရီ)
၎င်းသည် ရေပန်းစားသော ကလေးကစားနည်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပဲ အားကစားသမားများစွာကြားတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိသော လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြိုးခုန်ခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော Cardio လေ့ကျင့်ခန်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအချိန်ကိုက်မှုကို ထိန်းညှိပေးသည့်အပြင် မည်သူမဆို ဤလေ့ကျင့်ခန်းကို စမ်းသပ်ကြည့်ရန် ကိုယ်ပိုင် “အယူအဆများ” ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
(၂) ရေကူးခြင်း (၄၀၉ ကယ်လိုရီ၊)
ရေကူးခြင်းသည် ကယ်လိုရီအချို့ကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး ရောဂါများစွာကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချို၊ လေဖြတ်ခြင်းနှင့် အခြားနှလုံး ဖောက်ပြန်မှုပုံစံများကို ရှောင်ရှားရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ကြွက်သားများကို သန်မာစေရန် ကူညီပေးပြီး ဒူး သို့မဟုတ် တင်ပါးများတွင် ဖိစီးမှုလုံးဝမဖြစ်စေခြင်းက အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) တောင်တက်ခြင်း (၄၀၉ကယ်လိုရီ)
ကယ်လိုရီအချို့ကို လောင်ကျွမ်းစေမည့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာနှင့် ပျော်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်တောင်တက်ခြင်း လေ့ကျင့်ခန်းသည် တစ်ကိုယ်လုံးမှ ကြွက်သားများကို အများအပြား အားစိုက်ထုတ်ပေးပြီး အကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စွမ်းဆောင်ရည် တိုးမြင့်လာသောကြောင့် သင့်စိတ်ကျန်းမာရေးတွင်ပင် တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။
(၄) စက်ဘီးစီးခြင်း (၆၁၄ ကယ်လိုရီ)
ပြေးခြင်းကဲ့သို့ပင် စက်ဘီးစီးခြင်းဖြင့် ရရှိသော ကယ်လိုရီ ဆုံးရှုံးမှုဟာ လေ့ကျင့်ရေး၏ ပြင်းထန်မှုနှင့် များစွာသက်ဆိုင်ပါတယ်။ စီးနင်းနေစဉ်အတွင်း ဆက်တိုက်ဆိုသလို အားစိုက်နင်းခြင်းဟာ ပြေးခြင်းကဲ့သို့ပင် ထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ စက်ဘီးစီးခြင်းဟာ လေ့ကျင့်ခန်းကောင်းတစ်ခုအဖြစ် သင့်ကြွက်သားများနှင့် နှလုံးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများအပြင်၊ ဂေဟစနစ်နှင့်လိုက်ဖက်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
(၅) အေရိုးဘစ်လေ့ကျင့်ခန်း (၃၇၂ကယ်လိုရီ)
အေရိုးဗစ်သည် အားကစားရုံများထဲတွင် ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး လှုပ်ရှားမှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွခြင်းကို ဂီတဖြင့် ပါ၀င်ပံ့ပိုးပါတယ် ။ ဤလေ့ကျင့်ခန်းသည် အဆီလောင်ကျွမ်းစေရုံသာမက သင့်နှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါသည်။ Aerobics ဟာ အရိုးအဆစ်များကို ဖိအားမပေးသောကြောင့် အရိုးပွရောဂါရှိသူများ လုပ်ဆောင်ရန် ကောင်းမွန်သော လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။
(၆) Elliptical workout (၃၃၅ ကယ်လိုရီ)
အဆိုပါ ဘဲဥပုံစက်များသည် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု ပေးစွမ်းပြီး ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်း (ခြေသလုံး၊ ပေါင်) နှင့် ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်း (လက်၊ နောက်‌ကျော) တို့ကို ပုံဖော်ပါတယ်။ ထိခိုက်မှုနည်းသော လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက် ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်မှန်ပြန်လည်ရရှိလိုသော အမျိုးသမီးများအတွက် ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
(၇) Burpees (၃၁၆ ကယ်လိုရီ)
၎င်းအား လေ့ကျင့်ရန် စက်ပစ္စည်းလုံးဝမရှိဘဲ သင့်ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်သည့် အသွက်လက်ဆုံး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ Burpees သည် ပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်၍ တစ်မိနစ်လျှင် 10 ကယ်လိုရီအထိ ဆုံးရှုံးနိုင်စေမည့် အပြင် တစ်ကိုယ်လုံး ကြွက်သားတုံ့ပြန်မှုကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။
(၈) ဘောလုံးပုတ်ကစားခြင်း ( ၄၄၆ ကယ်လိုရီ)
အားကစားနှင့် အပြိုင်အဆိုင်ဂိမ်းများဟာ ပိုကောင်းသော လေ့ကျင့်ခန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဤဂိမ်းသည် ကစားသမားများ ပွဲအတွင်း အချိန်ပြည့်လှုပ်ရှားနေသောကြောင့် ကယ်လိုရီအများဆုံးလောင်ကျွမ်းသည့်ဂိမ်းများထဲတွင် ပါဝင်ပါတယ်။
ကလေးများနှင့်ကစားခြင်း (တစ်နာရီ – ၃၇၂ ကယ်လိုရီ)
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေဘတကူးတက မလိုအပ်ပါဘူး။ သင့်ကလေးများနှင့် ဆော့ကစားချိန်တစ်နာရီဟာ လုံလောက်သော ကယ်လိုရီပမာဏကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ Gym သွားရန် အချိန်မရှိသော ကလေး မိခင်များသည် ဤအကြောင်းကို သိရှိပါက ပျော်ရွှင်ပေလိမ့်မယ် ။
မှတ်ချက်- ဤဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားသော ကယ်လိုရီတန်ဖိုးများသည် ၁၅၅ ပေါင်ရှိသော သာမန်လူတစ်ဦး၏ ပျမ်းမျှ ကယ်လိုရီဆုံးရှုံးမှုကို တွက်ချက်ထားပါတယ် ။
သင်ရော ပြေးရတာကြိုက်လား ?? မနက်ပိုင်း သို့မဟုတ် ညနေပိုင်းတွင် မည်သည့်အချိန်တွင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကို နှစ်သက်ပါသလဲ ??